मझेरी भलाकुसारी, अंक ०८ (रामविक्रम थापा) | मझेरी डट कम
kbs — Tue, 04/19/2011 - 17:53
रामविक्रम थापाज्यू, तपाईंलाई मझेरीमा स्वागत छ । शुरुमा आफ्नो परिचय दिनुहोस् ।
धन्यवाद, २०२६ सालमा बाम्राङ-८, खोटाङमा जन्मेको म रामविक्रम थापा जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङको स्रोत व्यक्तिमा कार्यरत छु र थोरबहुत साहित्यकर्मी पनि हुँ !
आफ्नो साहित्यिक यात्रा बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि ?
वाल्यकालमा बालकविता सिर्जनाबाट मेरो साहित्यिक यात्रा शुरू भएको हो । पछि क्रमशः छन्दोबद्ध कविता, गजल, लघुकथा, लोककथा, समीक्षादि विधामा मेरो साहित्यिक यात्रा विस्तार हुँदै गयो । २०३५ सालदेखि लेखन र २०४० सालदेखि फुटकर प्रकाशन भएको हो । मेरा तीन कृति प्रकाशित छन् ।
साहित्यमा लाग्नुपछाडि केही विशेष भूमिका छ कि ?
म साहित्यमा लाग्नुको त्यस्तो उल्लेख्य र विशेष भूमिका त केही छैन । पारिवारिक अभाव, सामाजिक विकृति-विसंङ्गति र लेखनाथ, देवकोटाका कविता पठनले म साहित्यमा लागेको हुँ । अहिले त जीवन बाँच्नुको सार्थकता नै ठान्छु म साहित्यलाई ।
साहित्य बाहेक अन्य कुनै पेशामा संलग्न हुनुहुन्छ ?
साहित्यले खान दिँदैन र पारिवारिक अभाव पूरा गर्दैन । अतः कुनै पेशामा संलग्न नभएमा हातमुख जोड्न समेत धौधौ पर्ने भएकाले जिल्ला शिक्षा कार्यालय, खोटाङ, अन्तर्गत फाक्टाङ श्रोत केन्द्रको श्रोत व्यक्तिमा हाल म कार्यरत छु ! मेरो पदाधिकार भनेको मा.शि. तृतीय श्रेणी हो ।
लेख्नको लागि भनेर कत्तिको समय छुट्याउनुहुन्छ ?
अहँ, म त्यसरी लेख्नका लागि भनेर निश्चित समय छुट्याउँदिनँ । सिर्जनात्मक लेखन भन्ने कुरा लेख्छु भनेर लेखिने होइन र लेख्दिनँ भनेर धर पाउने पनि होइन । यो एउटा आकस्मिक र अप्रायोजित कर्म हो ।
नेपाली साहित्यका तपाईंका आदर्श व्यक्तित्वहरू को हुन्? तिनका कस्ता पाटा मन पराउनुहुन्छ?
नेपाली साहित्यको सन्दर्भमा महाकवि देवकोटा र भूपी शेरचन मेरा आदर्श व्यक्तित्वहरू हुन् । देवकोटाको अभावग्रस्त जिन्दगानीको निरन्तर सिर्जना र भूपीको सरलता एवम् विद्रोहबाट म बढी प्रभावित छु ।
मन पर्ने लेखक अनि रचनाहरू ?
महाकवि देवकोटा, भूपी शेरचन, माधव घिमिरे र दिनेश अधिकारीका कविताहरू मलाई विशेष मन पर्छन् । खोटाङे कवि जसराज किराँती पनि मेरा प्रेरणाश्रोत र आदर्श कवि हुन् ।
हालका आशा गर्न सकिने लेखक लेखिकाहरूको कुरा गर्दा को को सम्झनुहुन्छ ?
नेपाली साहित्यको सन्दर्भमा मेरा समकालीन पुस्ताका साथीहरू अरुण नदी, युवराज नयाँघरे, श्रवण मुकारुङ, ज्ञानेन्द्र विवश, रत्न प्रजापति, रमेश श्रेष्ठहरूलाई आशलाग्दा सर्जकहरूका रूपमा यत्तिवेला यहाँ म सम्झिरहेछु ।
तपाईंका कथा, कविता, गजल, समीक्षाहरू पढ्न पाइएको छ । आफैंले आफूलाई कुन बिधाको लेखक मान्नुहुन्छ?
साहित्यका बहुविधामा कलम चलाए पनि आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्दा म आफूलाई कविता, लघुकथा, र बाल-कविताको विधाको लेखक मान्नु उचित ठान्छु । हालसम्म 'छरिएका कविता' (कविता संग्रह), 'पात्रहरू' (लघुकथा संग्रह) र 'वालपोष' (बालकविता संग्रह) प्रकाशित भैसकेका छन् ।
तपाईंको घनिष्टता भएका समकालीन साहित्यकारहरू को को हुनुहुन्छ ? के कस्ता साहित्यिक गतिबिधिहरू गर्नुहुन्छ ?
नेपाली साहित्य संसारका कुरा गर्दा खोटाङका विष्णु आभूषण, नगेन्द्रराज रेग्मी, धनप्रसाद सुवेदी तथा उदयपुरका पुन्य कार्की र
नन्दलाल आचार्यहरू मेरा घनिष्ठ समकालीन साहित्यकारहरू हुन् । वहाँहरूसित म साहित्यिक अन्तरक्रिया र योजनामा संलग्न हुने गर्छु । काठमाण्डौंका अरूण नदीबाट पनि साहित्यिक जानकारी लिने गर्छु ।
एक असल लेखकले के-कस्ता नियम अनि मान-मर्यादा पालना गर्नुपर्छ?
लेखक इमान्दार र प्रतिबद्ध त हुनै पर्यो । निरन्तरता र धैर्यता लेखकका गहना हुन् । अध्ययन, चिन्तन र मनन त आधारभूत शर्त हुन् जस्तो मलाई लाग्छ ।
साहित्यकार नभएको भए के हुनुहुन्थ्यो ?
ठोकुवा गरेर त भन्न सक्दिनँ । सायद नेता हुन्थेँ कि । कुनै इन्जिनियर वा डाक्टर । कि, मानसिक असन्तुलन भएर पागल पो हुन्थेँ कि ...! (एकछिन हाँसो छाउँछ । साँच्चै कहिलेकाहीं गम्भीर कुराले पनि हाँसो ल्याउँछ । सायद अचेतन मनमा उब्जेको सम्भावित आँसुको द्वार छेक्न पो यस्तो अवस्था आउँछ कि !)
साहित्यकार हुनुमा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
अर्थ र पदको मामलामा कमजोर भए तापनि साहित्यकार हुनुमा मलाई आत्मसन्तुष्टि भने मिलेकै छ । आफ्नो पहिचान कायम हुनु पनि ठूलै कुरा रहेछ जस्तो लाग्छ- कहिलेकाहीँ ।
मोफसलको लेखकको हैसियतले साहित्यिक समाजबाट कत्तिको न्याय पाएको जस्तो लाग्छ ?
मोफसलका लेखकलाई कुलामाथिको बाली (बिरूवा) भन्छु म । मोफसलका लेखकहरू धेरै अवसर र सुविधाबाट बञ्चित भएर कलम चलाइरहनु परेको तीतो यथार्थ छ । आजको इन्टरनेटको जमानामा फोन, मोवाइल पनि नचल्ने ठाउँमा बसेर हुलाकबाट रचना प्रेषण गर्दै साहित्य सिर्जना गर्नु निक्कै कष्टकर कुरा हो । पुस्तक प्रकाशन र पुरस्कार प्राप्तिको त के कुरा फुटकर रचना प्रकाशन गराउन पनि सहज हुँदैन ।
नेपाली साहित्य कस्तो अवस्थामा छ ? कतातिर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ?
नेपाली साहित्य सिर्जनामा नयाँ पुस्ताको सकृय सहभागिता छ । तर यो पुस्ताको मूल्यांकन र समालोचना हुन सकेको छैन । राजधानीले मोफसललाई अझै पनि किचिरहेछ, थिचिरहेछ । सङ्ख्यात्मक वृद्धि भएर पनि गुणात्मकतामा ह्रास आइरहेको तीतो सत्यलाई पनि नकार्न सकिंदैन ।
नेपाल साहित्यफाँटमा के कस्ता कमी-कमजोरी छन् जस्तो लाग्छ?
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र साझा प्रकाशन सत्तामुखी छन् । विशुद्ध साहित्यिक भए राम्रो हुन्थ्यो । राजनीतिका अतिरिक्त स्रष्टाहरू
विभिन्न गुट-उपगुटमा विभक्त हुनु अँझ नराम्रो कुरा हो ।
अहिलेको साहित्यिक वातावरणको कुरा गर्दा यसो गर्न पाए, उसो गर्न पाए अलि सजिलोसँग स्रष्टाहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो केही छ ?
साहित्यिक संस्था र प्रकाशन संस्थाहरू राजधानीकेन्द्रीत हुनु भएन । शाखा र उपशाखा खोलेर भए पनि यस्ता संस्थाहरूलाई विकेन्द्रित गर्दै प्रकाशन र पुरस्कारजस्ता कुराहरूमा समावेशी सिद्धान्त लागू गर्नुपर्छ । सर्जकहरूको वृतिविकास र उपचारतर्फ पहल गर्नुपर्छ ।
साहित्यमा लागेर के पाउनुभयो, के गुमाउनुभयो ?
आफ्नो पहिचान र साथी-भाइ पाएँ । साहित्यलाई मैले जीवन बाँच्ने आधार बनाएँ । गुमाउने सन्दर्भमा पद र पैसा गुमाएँ कि जस्तो
आत्मानुभूति हुन्छ ।
हालसम्म के कस्ता रचनाहरू बाहिर निकाल्नुभा' छ?
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 'समकालीन साहित्य' बाहेक अरू सबै जसो राष्ट्रिय स्तरका पत्रिकामा मेरा रचना प्रकाशित भइरहेका छन् । पुस्तक प्रकाशनमा समकालीनहरूभन्दा पछि छु । अहिलेसम्म प्रकाशित गरेका पुस्तकमा 'पात्रहरू' (लघुकथासंग्रह ०५५), 'छरिएका कविता' (कवितासंग्रह ०५६), र 'वालपोष' (बालकविता संग्रह) छन ।
तपाईंका रचनाहरू, अरू पत्रिकाका तुलनामा, अक्सर गोरखापत्र, मधुपर्क, मुना, र युवामन्चतिर अलि निकै पाइन्छ । सरकारी पत्रिकाहरू नै रोज्नुमा त्यस्तो केही छ कि ?
हो, मेरा बढी रचनाहरू सरकारी पत्रिकाहरू मै आइरहेका छन् । यसको कारण भनेको थोर-बहुत भए पनि पारिश्रमिक पाइने, शुद्ध र आकर्षक छपाइ हुने, र बिक्री वितरणको व्यवस्था राम्रो भएकाले पत्रिका धेरै ठाउँमा पुग्ने अवस्थाले गर्दा हो ।
तपाईंका लागि पाठक कत्तिको महत्वपूर्ण छन् ? कि, आत्मसन्तुष्टिको लागि मात्रै लेख्नुहुन्छ ?
पहिले त आत्मसन्तुष्टिकै लागि लेखिन्छ । लेखिसकेपछि रचनाले पाठक खोज्छ र पाठकले पढिदिएपछि लेखकलाई थप सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ । त्यसैले सिर्जनापछि म आफ्ना रचनाहरू पत्नी र छोराछोरीलाई सुनाएर मजा लिने गर्छु । अनि तुरून्त पत्रपत्रिकामा पठाउने गर्छु ।
पाठकहरूसँग दूरी घटाउन त्यस्तो केही प्रयासहरू गर्नुभएको छ ?
अहँ, त्यस्तो केही गरेको छैन । मात्र कोठामा बसेर लेख्ने र पत्रिकामा छपाउने बाहेक । साहित्यिक गोष्ठीहरूमा पनि वाध्यता भए पछि मात्र पुग्ने गरेको छु ।
भविष्यका लागि के कस्ता योजनाहरू ठिक पार्नुभा'छ ?
साहित्यमा त्यस्तो प्रायोजित योजना छैन । कविता, लघुकथा, बालकविता र लोककथाका पुस्तक निकाल्ने धोको छ । समय र पैसाका कारणले अवरोध भइराखेको छ । प्रकाशकहरूलाई तेल लगाउन पनि लेखकीय स्वाभिमानले दिइराखेको छैन ।
मझेरी कत्तिको हेर्नुभएको छ ?
तराई झरेको बेला कहिलेकाहीँ अरूको सहयोगले मझेरी हेर्छु । नन्दलाल आचार्यजीले तपाईँका रचना मझेरी डट कममा छन् भनेर जानकारी दिएपछि यस बारे चासो र खोजी बढेर गएको हो ।
संसारभरि छरिनुभएका लेखक तथा पाठकहरूलाई केही सन्देश दिन दिनुस् न!
'साहित्यलाई माया गरौँ, लेख्न र पढ्न नछाडौँ । केही अंश समय र अर्थ यसमा लगानी गरौँ । ' सबै लेखक र पाठकहरूलाई मेरो आग्रह यही हो ।
मजस्तो विकट जिल्ला (खोटाङ)को अति दुर्गम गाउँ (फाक्टाङ कृष्णगर्त) मा बस्दो बबुरोलाई मझेरीको 'भलाकुसारी'मा सहभागी गराउनुभएकोमा आभारपूर्वक धन्यवाद भन्छु र त्रुटिहरूमा क्षमाप्रार्थी छु । मेरा विचार र रचनाका सन्दर्भमा पाठकहरूको रचनात्मक प्रतिक्रियाको अपेक्षा पनि गर्दछु । अन्तमा, नव वर्ष ०६८ को सबैमा शुभकामना ।
साहित्यकार रामविक्रम थापाज्यूलाई मझेरी भलाकुसारीमा सहभागी भैदिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद छ । बिकटताको बाबजूद संघर्षद्वारा केन्द्रीय स्तरमा छवि पुर्याउन सक्नुभएका वहाँलाई मझेरीको तर्फबाट बधाई तथा शुभकामना ! साहित्यकार नन्दलाल आचार्यज्यू विना यो भलाकुसारी सम्भव थिएन । वहाँ अर्का धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ ।
--मझेरी डट कम
‹ मझेरी भलाकुसारी, अंक ०३ (आचार्य प्रभा) मझेरी भलाकुसारी, अंक १२ (देश सुब्बा) ›
स्रष्टाभलाकुसारीले नयाँ जोस थप्छ
nandalal.acharya — Sat, 04/23/2011 - 05:48
लामो समयदेखि यस साहियत्य संसारमा रमाउँदै आउनुभएका थापा सरका विचारहरू पढ्न पाएर गर्व महसुस भइराखेको छ !
राविथा सरको संघर्षशिल जीवनचर्चाको एउटा चोइटो हो यो !
विज्ञान क्षेत्रको छात्रले साहित्यमा त्यत्रो विशाल घर बनाउनु अनुकरणीय कदम हो !
साहित्यकै लागि उहाँले ठूल्ठूला लाभलाई तिरस्कार गर्नुभको बारे धेरै रोचक कहानी मैले सुनेको छु
उहाँका भावनालाई मेरो सलाम र मझेरीको प्रयत्न र अनुरागलाई जदौ !
शरण सरलाई पनि मेरो धन्यवाद !
साहित्यलाई माया गर्नेहरू गरिरहन्छ
कृष्णगर्त कसैको लागि नहोस्
यही चाहाना र कामना
अनि वसन्त ऋतुके शुभ आगमनको
साहित्यकार थापाज्यूसितको भलाकुसारी
Sharan aansu — Fri, 04/22/2011 - 01:46
साहित्यकार थापाज्यूसितको भलाकुसारी पढ्न पाउँदा मैले आफूलाई धन्य सम्झें / प्रेरक र ओजस्वी प्रतिभा हुनु हुँदो रहेछ/ वहाँलाई र मझेरीलाई अनि भलाकुसारी प्रकाशनमा पुर्याउनु भएको चाँजोपाँजोका लागि साहित्यकार नन्दलाल आचार्यज्यूलाई धेरै धन्यवाद/
अर्काका विचारलाई मथ्दा नयाँ विचार आउँछ
nandalal.acharya — Sat, 04/23/2011 - 06:04
गुन देख्नुभकोमा धन्यवाद शरण सर
मेरो मात्र हैन
मझेरी सधैँ सबैको बनोस् भन्ने हो
यसैका लागि पहुँचबाट बाहिरकाहरूलाई मझेरीले समेट्ने कार्यमा तीव्रता दिनेछ भन्ने आस गर्न सकिन्छ
कथाकार उपन्यासकार र निबन्धकार पुन्य कार्की
गजलकार, कवि लघुकथाकार इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
अनि गीत गजलकार (नेपाली, मैथिली र थारू भाषामा) देवकरण माझीजस्ता सर्जकको जोसिला विचारले मझेरीको पर्खाल ढाकियोस् भन्ने चाहाना छ
रामविक्रम थापाज्यूलाई धन्यवाद
kbs — Sat, 04/23/2011 - 13:58
रामविक्रम थापाज्यूलाई धन्यवाद छ ! नन्दलालजीलाई धन्यवाद! आशा छ यो भलाकुसारी मझेरीका पाठकहरूको लागि सकारात्मक सन्देश पुग्नेछ । भविष्यमा भलाकुसारी पनि निरन्तरता दिनेछौं ।
उज्वल साहित्यिक भबिस्यको कामना
prakashpoudel — Fri, 04/29/2011 - 19:31
मोफसलमा रहेर साहित्यको क्षेत्रमा उल्लेखनिय काम गर्ने सिमित स्रस्टाको सुचीमा रामबिक्रम थापा जी पर्नु हुने बुझाइ रहयो मेरो । वहाँको अन्तर्बार्ता पढे पस्चात । फुटकर रचनाको साथमा तीन वटा कृती समेत बहिरा ल्यायी सक्नु भयका थापा जी को बारेमा धेरै कुरा जान्ने अबसर दियकोमा मझेरी परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद । भलाकुशारी स्तम्भ लाई यसरि नै नियमित बनाउन अग्रह समेत छ सन्चालक कुमार जी सँग ।
राम बिक्रम थापा जी मात्र होईन झापा देखी कंचनपुर सम्म र ताप्लेजुङ देखी दार्चुला सम्म धेरै स्रस्टाहरु हुनुहुन्छ्, जस्ले थापा जी ले जस्तै गरी साहित्य लाई औधी माया गर्नु हुन्छ र साहित्य सेवा समेत उत्तिकै गरिरहनु भयको छ । फेरी पनि थापा जी लाई धन्यवाद अनि उज्वल साहित्यिक भबिस्यको कामना ।
हार्दिक हार्दिक वधाई छ, दाइ रामवित्रम लाई ।
keshu birahi — Sat, 05/21/2011 - 09:58
लामो समय देखि साहित्य साँधनामा लागिरहनहुने दाइ रामवित्रम थापालाई भलाकरासारीमा समेट्नु भएकोमा हार्दिक हार्दिक वधाई छ । दाइ रामवित्रम लाई शुभकामना ।
dhiraj.rawal.18 — Sun, 06/15/2014 - 13:21
मैले तपाईको अर्तर्बात सुने लामो समय देखि साहित्य छेtrमा लाग्नू भयको रहेछ नयाॅ लेख हरु प्रकाशि होस मेरो शूभकामना